J: Animal - Strange Stingless Jellyfish အဆိပ်မျှင်မရှိသော ဂျယ်ရီငါး
thanks for keep posting interesting things all the time.
ရ ပေါင် ရုပ်ရှင် ကြည့်ပြီးတော့မှ ပို သဘောပေါက်လာတယ။် မှတ်ချက်ထားခဲ့တာ ဂျေလား. ..ဂျေဆိုရင် သိတ်ဝမ်းသာမိမှာဘဲ။
Jelly fish က အဆိပ်ပြင်းတယ်။ သူ့ အဆိပ်မျှင်ထိုးခံရရင် ၁နာရီအတွင်း သေနိုင်တယ်
ဟုတ်ပါတယ် မခင်ဦးမေ. ကျနော် ကော်မဲန့် ရေးခဲ့တာပါ